ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း - Digital Signage & Video Wall Software
ဟုတ်တယ်၊ ငါတို့ကတကယ့်လူပဲ! ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းပိုမိုသိရှိရန်!
Patrice သည် Easy Multi Display ကိုနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်ထောင်သူဖြစ်သည်။ သူသည်ပြင်သစ်ဖြစ်ပြီး ၄၅ နှစ်အရွယ် Self- ကြေငြာချက်ရှိသည့်ပညာရှင်ဖြစ်သည်။ သူသည်နည်းပညာကိုစိတ်ဝင်စားသည်။ ဤတွင်သူသည်နောက်ဆုံးဆန်းသစ်သောလျှပ်စစ်စက်ဘီးကိုစီးနေသည် ကောင်းဘွိုင် Bruxelles ၌တည်၏။
Patrice သည်သတ္တိရှိသည့်စွန့် ဦး တီထွင်လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ပြီးဆော့ဖ်ဝဲကိုဒီဇိုင်းဆွဲသည် Vitrine မာလ်တီမီဒီယာ 15 နှစ်ကျော်သည်။ သူ၏ဖောက်သည်အချို့မှာ Airbus, Unicef, Visa, Canon တို့ဖြစ်သည်။
နှစ်စဉ်စနေ၊ တနင်္ဂနွေအနည်းငယ်တွင်သူသည်ဖျော်ဖြေရန်သူ၏ပုံမှန်အချိန်ဇယားအတိုင်းအချိန်ယူသည် ဗီဒီယိုဂျော်ဂျီယာ.
- ပြnoနာမရှိဘူး။ ဖြေရှင်းနည်းများသာရှိသည်။ -
Guy သည် Easy Multi Display အတွက်စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်။ အသက် ၄၄ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော Guy သည်ပြင်သစ်နှင့်ဗီယက်နမ်နှစ်မျိုးစလုံးနှင့်အတူစွန့်စားရသူဖြစ်သည်။ Guy ကသူ့ကလေး ၂ ယောက်ကိုသူ့ဘ ၀ အတွက်အကောင်းဆုံးစွန့်စားမှုတစ်ခုလို့မှတ်ယူသည်။ ဒါက Guy နဲ့သူ့သမီး Iris ဟာဘရပ်ဆဲလ်အရောင်းပြခန်းမှာပါ။
Carrefour အတွက်အိုင်တီစီမံကိန်းမန်နေဂျာအဖြစ် ၅ နှစ်လုပ်ကိုင်ပြီးနောက်သူသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ် ဦး အဖြစ် ၁၅ နှစ်ကျော်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ Guy သည်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်လို။ ခိုင်မာသောဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်လိုသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ Guy နှင့်ပက်ထရစ်တို့သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်စစ်ပွဲခန်းမအတွက်ဒီဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်ဆော့ဖ်ဝဲကိုရှာဖွေနေချိန်တွင်တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာပထမ ဦး ဆုံးမျက်မှောက်မှာချစ်ကြည်ရေးဖြစ်ခဲ့သည်။
- အနိုင်ပေးဝံ့သူကားအဘယ်သူ။ -
ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဆောင်မှု၏အဓိကအချက်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်စီးပွားရေးလွယ်ကူ၊ ရိုးရှင်းပြီးတတ်နိုင်စေလိုသောဆန္ဒဖြစ်သည်။ သင်၏စီးပွားရေးကိုကြော်ငြာခြင်းသို့မဟုတ်တင်ခြင်းသည်လက်တစ်ဖက်တည်းနှင့်ခြေထောက်မကျသင့်သကဲ့သို့အဆင့်မြင့်ကွန်ပျူတာစွမ်းရည်လည်းမလိုအပ်သင့်ပါ။
Easy Multi Display ကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးခဲ့တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လက်ရှိဆော့ဖ်ဝဲကဖောက်သည်တွေအတွက်အရမ်းတောင်းဆိုလို့ပဲ။ သူတို့ဟာရှုပ်ထွေးတဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံတွေလိုအပ်တယ်၊ လစဉ်ကြေးကြီးကြီးမားမားမဖော်ပြထားဘူး။
မြန်ဆန်လွယ်ကူသောဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းအင်ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) ကိုတီထွင်ခြင်းအားဖြင့်သင်၏မီဒီယာကိုသင်လိုချင်သောအတိုင်းအတာနှင့်နည်းပညာနှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲလိုအပ်ချက်များကိုဖော်ပြနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ EMD အပလီကေးရှင်းသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်၊ တစ်သက်တာလိုင်စင်ရရှိထားပြီး၎င်းသည် Cloud ကိုအသုံးမပြုပါ။
ပထမတစ်ခုကစျေးကြီးတယ်၊ ဒုတိယကတော့လုံးဝလုံခြုံမှုမရှိဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကုမ္ပဏီအများစုက IT လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမသိတာဒါမှမဟုတ်ဘာမှမသိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကစီမံခန့်ခွဲတာပဲ။
ထိခိုက်လွယ်သောအကျိုးဆက်များနှင့်အတူဟက်ကာဖြစ်ပွားမှုများပြားလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်အထိခိုက်မခံသောဆိုဒ်များနှင့်ပြင်းထန်သောကုမ္ပဏီများမှသုံးစွဲသူများသည်၎င်းတို့၏သတင်းမီဒီယာများကို 5.0 မိုcloud်းတိမ်ဖြင့်ဖော်ပြရန်အလိုမရှိပါ။
အလားတူရွေးချယ်မှုပြုပါ (ကျွန်ုပ်တို့၏ CAC 40 ကုမ္ပဏီများမှစမ်းသပ်ပြီးအတည်ပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ညွှန်းကိုးကားရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်) ကျွန်ုပ်တို့၏ software ကိုသုံးပါ။ သင်၏မီဒီယာဖိုင်များကိုပြသရန်တတိယပါတီကုမ္ပဏီတစ်ခုအပေါ်မှီခိုနေခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ပါ။
* Fugue နှင့် Sonatype မှပြုလုပ်သောစစ်တမ်းတစ်ခုအရကုမ္ပဏီများ၏ ၃၆% သည်လွန်ခဲ့သော ၁၂ လအတွင်းပြင်းထန်သောဒေတာယိုစိမ့်မှုသို့မဟုတ် cloud လုံခြုံရေးဖောက်ဖျက်မှုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။
ရင်းမြစ် - https://resources.fugue.co/state-of-cloud-security-2021-report